Dalka Mauritius oo 12 burcad-badeed Soomaali ah ku xukumay shan sanno oo xabsi ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDalka Mauritius oo 12 burcad-badeed Soomaali ah ku xukumay shan sanno oo xabsi ah
Dalka Mauritius oo 12 burcad-badeed Soomaali ah ku xukumay shan sanno oo xabsi ah
August 12, 2016 Puntland Mirror World 0
Burcad-badeed Soomaali ah oo ku xiran xabsi ku yaala dalka Mauritius.
Port Louis-(Puntland Mirror) Haaydaha garsoorka ee wadanka Mauritius ayaa maalintii Khamiista ee shalay xukun ku riday 12 burcad-badeed Soomaali ah.
Burcad-badeeda ayaa lagu eedeeyay in ay weerar ku qaadeen Markab xamuul oo marayay biyaha Badweynta Hindiya sanadkii 2013-kii, waxaana lagu xukumay shan sanno oo xabsi ah.
Kooxda burcada ah ayaa waxaa gacanta ku dhigay wax yar kadib markii ay weerarka ku qaadeen markabka, ciidamada la dagaalanka burcadbadeeda ee jooga biyaha Badwenta Hindiya.
Nimanka burcad-badeeda Soomaalida ah ee la xukumay ayaa da’doodu waxay u dhaxaysaa 22-sanno ilaa iyo 47.
Intii uu socday xukunka garsooraha ayaa sheegay in saddex sanno oo hore oo ay xabsiga ku jireen laga saarayo wakhtigooda xabsiga.
Mauritius ayaa ah wadan jasiirad ah oo ku dhex yaala Badweynta Hindiya ee xeebta koonfur-bari qaarada Afrika.
July 25, 2016 Nin Suuriyaan magangalyo raadis ah oo isku qarxiyay dalka Jarmalka